Warshadda Soo Saarka - Soosaarayaasha Shiinaha iyo Shirkadaha Shiinaha - Qaybta 2
DaoDao Suugo soy madow
Magaca Waxsoosaarka: Daodao Sauce Soy Subagga Waxaa loo isticmaalaa geesinimada iyo isteerinka leh hodan, waxyar macaan, iyo dhadhan cusbo leh. Waxyaabaha ay ka kooban tahay: biyo, soyb la qasay, buunshaha qumbaha, karaaram, cusbo, monosodium glutamate, xanjo xanthan, sodium benzoate. Amino acid nitrogen (sida laga soo xigtay nitrogen) ≥ 0.40g / 100ml Tayo: Xaddiga fasalka saddexaad ee meel hadhsan iyo meel engegan oo shaabadaysan. Nolosha shelf: 24 bilood Tilmaanta: 500mL * 12 halkii kartoon 1500 kartoon halkii 20'FCL Macluumaadka Nafaqada Macluumaadka halkii xirmo: Ansix ...
Sifee Sauce Soy Sauce
Magaca Waxsoosaarka: 180 Soosaaray Maraqa Soy Light Soodhaha: biyaha, soybean la jebiyey, qamadi, karam, cusbo, monokodium glutamate, aalkolada la cuni karo, I + G, sucralose. Amino acid nitrogen (marka loo eego nitrogen) Quality 1.20g / 100ml Tayada: Heerka darajada khaaska ah ee meel hadhsan oo qallalan oo xidhidhsan. Nolosha shelf: 24 bilood Tilmaanta: 500mL * 12 halkii kartoon 1500 kartoonkiiba 20'FCL Macluumaadka Nafaqada Macluumaadka Xirmooyinkiiba: Qiyaasta.33 Cabbirka adeegga: 15mL NRV% Tamarta 65kJ 1% Protein 1.8 ...
Sifee Sauce Soy Madoow
Magaca Waxsoosaarka: 180 Dib loo Sharaxay Soosaarka Maraqa Soy mugdiga ah: biyo, soybean dillaacay, qamadi, karam, cusbo, monokodium glutamate, khamriga la cuni karo. Amino acid nitrogen (sida laga soo xigtay nitrogen) ≥ 0.70g / 100ml Tayo: Qalabka fasalka koowaad oo ku yaal meel hadh leh iyo meel engegan oo shaabadaysan. Nolosha shelf: 24 bilood Tilmaanta: 500mL * 12 halkii kartoon 1500 kartoonkiiba 20'FCL Macluumaadka Nafaqada Xirmooyinkiiba: Qiyaas ahaan.33 Cabirka adeega: 15mL NRV% Tamarta 95kJ 1% Protein 1.2g 2% Fat ...
Yaree Suugada cusbada cusbada leh
Magaca badeecada: 180 Yaree Soodada Sooska cusbada Waxaa lagudajiyaa soybean non-GMO iyo sarreen tayo sare leh mudo ka badan 180 maalmood. Waxay leedahay cusbo ka yar 30% marka loo eego 180-ka nooca asalka ah ee loo yaqaan 'Soy Sauce'. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: biyo, soy ladahay, qamadi, cusbo, sonkor cad, khamri la cuni karo, gulutada monosodium, qamadiga khafiifka ah, aashitada, khal, I + G Amino acid nitrogen (sida laga soo xigtay nitrogen) ≥ 0.70g / 100ml Tayada: Tayada heerka koowaad meel hadh leh oo qalalan oo shaabadaysan. Nolosha shelf: 24 bilood Tilmaanta: ...
Magaca badeecada: 180 asal ah maraqa soy waxaa loo dajiyay soybean non-GMO iyo sarreen tayo sare leh muddo ka badan 180 maalmood. Waxay ka madax banaan tahay waxyaabaha cuntada lagu daro sida waxyaabaha lagu keydiyo, waxyaabaha cuntada lagu daro, kuwa macaan, iyo waxyaabaha walxaha midabka leh. Waxay leedahay dhadhan fiican oo macaan iyo midab casaan casaan ah. Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Biyo, soybean la qaldamay, qamadi, cusbo. Amino acid nitrogen (sida laga soo xigtay nitrogen) ≥ 0.90g / 100ml Tayada: Heerka darajada khaaska ah ee meel hadh leh iyo meel engegan oo shaabadaysan. Nolosha shelf: 24 bilood cayiman ...